सिकाइ उपलब्धि: माथि माथि हेर्दा तल सुक्यो !
२०७१ जेठ ३१ । हामी रामेछापको मन्थलीमा जम्मा भएका थियौँ । अवसर थियो— ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार, शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियान अन्तर्गत पहिलो कार्यक्रमको मूल्यांकन । बिहानको खाना खाने समयमा डा. विद्यानाथ कोइराला, राजेन्द्र दाहाल, मोहन ज्ञवाली, रामेछापका चर्चित शिक्षक र समाजसेवी गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो ।
शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् अभियान अन्तर्गतको पहिलो कार्यक्रम पनि भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न गुञ्ज श्रेष्ठले असाध्यै मेहनत गर्नुभएको थियो । मूल्यांकन कार्यक्रमका लागि पनि उहाँले नै पहल गर्नुभएको थियो । तर, त्यो बिहान उहाँ अत्यन्तै बेचैन हुनुहुन्थ्यो, आक्रोशित पनि । उहाँको मनमा शान्ति थिएन । पछि थाहा भयो, कारण ।
दुई–चार दिन अगाडि मात्रै एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । गुञ्ज सरको मन्थली उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट १८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । एसएलसीमा राम्रो नतिजा ल्याउन भनेर बिहान बेलुका नै ट्युसन, विद्यार्थीका लागि कुनै कुराको अभाव नहोस् भनेर गरिएको तयारी र उपलब्धिको ठूलो अपेक्षा नतिजा सार्वजनिक भएपछि तुसारापात भएको थियो । यसबाट जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो, आधारभूत तहदेखि नै अंग्रेजी माध्यमको पढाइ र निजी विद्यालयहरूभन्दा पनि राम्रो नतिजा दिने भनेर सबैले मन पराएको विद्यालयका इमानदार र कुशल प्राचार्यलाई निकै छटपटी भयो । विद्यार्थीहरूको असफलता देखेर झेक पनि चल्यो ।
गुञ्ज सर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनभन्दा पनि विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्थ्यो । कसरी विद्यालयलाई नमूना बनाउने ? विद्यार्थीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने र शिक्षकहरूको हित गर्ने भन्ने चिन्तनमा उहाँको समय बित्थ्यो । ४ कोठाबाट शुरू भएको विद्यालय अहिले ४२ रोपनीमा फैलिएको छ । क्याम्पस र ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा त पोलिटेक्निक विद्यालय नै सञ्चालन भइरहेको छ । गुञ्ज सरको सक्रियता र इमानदार व्यक्तित्वले यसमा ठूलो योगदान गरेको छ । यसरी सम्पन्नताको शिखर चढ्दै गएको नमूना विद्यालयका प्राचार्यलाई विद्यार्थी असफल हुँदा झेक चल्नु अनौठो कुरा होइन ।
गुञ्जबहादुर श्रेष्ठलाई चलेको झेक आम प्रधानाध्यापकहरूलाई चल्ने झेककै एउटा अंश थियो । शिक्षकहरूमा आफ्नो विद्यालयले ‘एसएलसीमा राम्रो नतिजा ल्याएको विद्यालय’ भन्ने सुनेर नाक फुलाउने भोक जागेदेखि नै समग्र विद्यालयहरू कुपोषणको शिकार भएका बालबालिका जस्ता भए । बाल्यकालमा पोषिलो खानेकुरा र राम्रो हेरचाह नपाएर जसरी बालबालिकाहरू अस्वस्थ बन्दै जान्छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू पनि माथिल्लो कक्षाका शैक्षिक उपलब्धिमा केन्द्रित हुँदा तल्लो तहका बालबालिकाहरूमाथि अन्याय बढ्दै गएको अवस्थाबाट गुज्रँदै आए ।
बाल्यकालमा राम्रो पोषण र प्रेमको अभावमा हुर्केका मानिसहरूले छिप्पिएपछि धेरै पोषिलो खानेकुरा पचाउन नसक्ने र उनीहरूको स्वाभाव पनि रौद्र वा एकांकी हुने अवस्था हामीले देख्तै आएका छौँ । त्यसरी नै तल्लो तहमा विद्यालयहरूले बालमनोविज्ञानमा आधारित, सिर्जनशील र प्रेमपूर्ण वातावरणमा राम्रो शिक्षण नगर्दाको परिणाम शैक्षिक उपलब्धि उत्साहजनक छैन ।
काठमाडौँको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय नेपालकै नमूना विद्यालयमा पर्छ । यसका पूर्वप्रधानाध्यापक धनञ्जय शर्मा सार्वजनिक सभामा भन्ने गर्नुहुन्छ— एसएलसीमा हाम्रो विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउनुको कारण हो २० वर्ष पहिले विद्यालयले पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक कक्षामा गरेको लगानी ।
हुन पनि ज्ञानोदयको प्राथमिक तहको शैक्षिक वातावरण देख्ने जोकोहीले पनि ती बालबालिकाले भविष्यमा हासिल गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धिको अनुमान गर्न सक्छन् । त्यस विद्यालयको माथिल्लो तह देख्नेलाई अनुमान गर्न मुस्किल पर्छ कि यो विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउँछ । तर, बाल्यावस्थादेखि नै विद्यालयमा राम्रो शैक्षिक वातावरण पाएका बालबालिकाहरूका लागि एसएलसी त सामान्य ‘परीक्षा’ लाग्छ ।
हिजोआज भूकम्प प्रभावित गाउँका विद्यालयमा पुग्दा शिक्षकहरू एसएलसीको बढी नै चर्चा गर्छन् । सानो कक्षाका बालबालिकाहरू बेवारिसे जस्ता छन् । तर, विद्यालय परिवारले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ट्युसन पढाउँदै छन् र उनीहरूमा एसएलसीमा राम्रो नतिजाको चर्को दबाब छ । तल्लो तहमा राम्रो शैक्षिक वातावरण नपाएका र जसोतसो कक्षा १० मा पुगेका बालबालिकाहरू अहिलेदेखि नै मानसिक पीडामा छन् । उनीहरू एसएलसीका लागि बाँचेका छन् । शिक्षकको खुशीका लागि पढिरहेका छन् । कथित ‘आइरन गेट’ बाट छिर्न आतुर छन् । एसएलसीमा राम्रो नतिजा ल्याउने चक्करमा विद्यार्थीहरूको जीवनोपयोगी शिक्षा लिने परिवेश गोलमाल भएको छ ।
गाउँघरका माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू तल्लो कक्षामा आफैले पढाएका विद्यार्थीमा मात्र निर्भर छैनन् । गाउँको एउटा कमजोर प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढेका बालबालिकाहरू पनि त्यो विद्यालयमा आउँछन् । धेरै माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले छिमेकी प्रावि र निमाविका शिक्षक÷अभिभावक तथा विद्यार्थीप्रति गुनासो गरिरहेको देखिन्छ— “ती विद्यालयले खत्तम विद्यार्थी तयार गरे । जस्तालाई पनि भर्ना लिनुपर्छ ।” तर, आफ्ना विद्यालयमा बालबालिका आपूर्ति गर्ने छिमेकी विद्यालयहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा कतै छलफल गरेको पाइँदैन । भोलिका दिनमा आफ्नो विद्यालयमा आउने बालबालिकाहरूलाई ती विद्यालयमै राम्रो तयारीका निम्ति सहकार्य गर्न सकियो भने मात्र नतिजा राम्रो आउन सक्ने हो ।
निश्चय नै विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि, जिल्ला स्तरीय र एसएलसी लगायतका परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तिनै पक्षको उत्तिकै चासो हुनुपर्छ । निजी विद्यालयहरूको उपलब्धिमा यी पक्षहरू आपसमा जोडिएका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई थप चुनौती छ । आफ्ना छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउन् भन्ने इच्छा राखे पनि राम्रो शैक्षिक वातावरण र सिकाइमा योगदान दिन नसक्ने अभिभावकका छोराछोरी नै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूमा थप अभिभारा छ । उनीहरूले नै अभिभावक र विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसनिम्ति घरमै गएर अभिभावकलाई छोराछोरीले राम्रो गरिरहेको कुरा सुनाउनुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीको राम्रो उपलब्धि सुनेर अभिभावकहरूलाई खुशी लाग्नेछ । छोराछोरीहरूको पठनपाठनका लागि समय व्यवस्थापन र अन्य सहयोगका लागि अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न पनि शिक्षकले सक्छन् ।
कुनै पनि विद्यार्थी कुन विषयमा कमजोर छन्, त्यसको कारण खोज्न शिक्षकहरू अग्रसर हुनुपर्छ । कमजोरी पत्ता लगाएपछि त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षकहरूको टोली वा विषय शिक्षक अग्रसर हुने हो भने सुधार हुँदै जानेछ । बालबालिकाहरूमा फरक क्षमता हुन्छन् र सिक्ने शैली पनि फरक हुन्छ । छिटो सिक्ने र ढिलो सिक्ने हुन्छन् । सानो उमेर र सानो कक्षादेखि नै बालबालिकाहरूको दिमागमा सिर्जनशीलता भर्न सकियो भने एसएलसीमा असफलताको तमासा बाँडिरहनु पर्दैन ।
बालबालिकाहरूमा सोच्ने र कारण पत्ता लगाउने सीपका लाग दिमागी क्षमता कसरी बढाउने ? उनीहरूले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता कसरी विकास गर्ने, कक्षाकोठाको वातावरण कसरी सिकाइमैत्री बनाउने, उत्प्रेरणा र सिर्जनशीलता बढाउन सक्ने शिक्षकहरू कसरी छनोट गर्ने ? यसमा सबैको चासो हुनुपर्छ । बिहानै विद्यालय पुगेर लामो समयसम्म केही नखाई रहने बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुँदैन । धेरै विद्यालयमा त पिउने पानीको पनि राम्रो सुविधा छैन । कसरी विद्यालयमै पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउने यसमा अभिभावक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सबैको सहयोग लिएर शिक्षकले पहल गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, हिजोको तुलनामा तल्ला कक्षाहरूमा पनि केही सुधार भइरहेको छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि कार्यहरू भइरहेका छन् । प्राथमिक तहका बालबालिकाहरू माथि चासो बढ्दै छ । कक्षाकोठाहरू सिकाइ मैत्री बनाउन पहल भइरहेका छन् । हामीले ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियानका क्रममा पनि प्राथमिक तहमा फोकस गर्न आग्रह र उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ । सिकाउने तरिका बदल्न प्रेरित गरिरहेका छौँ । कमजोरलाई प्राथमिकता दिन र प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । राम्रो गर्ने विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि आफूले अपनाएका राम्रा अभ्यासहरू आदानप्रदान गरिरहनुभएको छ । क्रमशः सिकाइ उपलब्धि पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
गुञ्ज सर त अहिले मन्थली उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राचार्य हुनु हुन्न । तर, यस वर्षको एसएलसीमा रामेछाप जिल्लाले २० बाट बढाएर ३५ प्रतिशत नतिजा हासिल गरेको कुराले उहाँलाई अलिकति भए पनि खुशी नै बनाएको हुनुपर्छ ।